Nkebi nke 1: Olee otú iji Windows Media Player dị ka ihe nkesa DLNA
Part 2: Gịnị Bụ DLNA, na ọ ka na-eji?
Nkebi nke 3: The ọhụrụ ụzọ enuba vidiyo si na kọmputa na-TV
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ala nke nkà usoro iji jide n'aka na TV ma ọ bụ ndị ọzọ na mgbasa ozi na-streamed jidesie kọmputa na ala na afọ ojuju. DLNA-anọchi anya "Digital Living Network Alliance" na ọ bụ Sony Corporation nke mere n'aka na n'elu ikpo okwu a na-setịpụụrụ onye ọrụ nke mere na ha nwere ike mfe enuba ha mmasị na-egosi site na kọmputa na-TV na Anglịkan. Ọtụtụ ngwaọrụ na yiri ngwá nwere ebe ọ bụ na e mepụtara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results na mmekọrita ọrụ ahụ. A nkuzi ga-DLNA na ikwu na windows media ọkpụkpọ.
Mgbe ọ na-abịa windows mgbe ahụ nkà na ngwá a chọrọ iji jide n'aka na ihe nkesa DLNA na-kere na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na Windows Media Player bụ nnọọ e ina nke kpebiri n'ihi na onye ọrụ. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ ga na-ekwukwa na usoro nke e kọwara ebe a bụ pụtara dị mfe na onye ọrụ nwere ike ijide n'aka na okwu a kpebiri site na isoro usoro ndị na nakwa na e agbakwunyere na screenshots na-eme ka n'aka na usoro ọbụna na-aghọ mfe n'ihi na onye ọrụ. Windows media ọkpụkpọ nwere a arụmọrụ nke na-eme n'aka na ndị ọzọ networked ngwaọrụ na-abụghị nanị na ya kwurịtara okwu ma gụgharia na-mere na a ire ụtọ n'ụzọ. Ọ bụ n'ozuzu onu nke Windows Media Player nke na-eme n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na nke a na mkpokọta ngwọta na-na-enye ka ọrụ ndị na-achọ kwupụta ndị ọzọ omume na-eme ka ha DLNA nrọ-emezu. Iji jide n'aka na nke onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na mkpokọta egwu results na nke a ọ na-gwara iji jide n'aka na ndị na-esonụ usoro a soro kpamkpam ina nke kpebiri ASAP n'enwetaghị n'ime ukwuu nke.
1. Iji mee ka n'aka na DLNA ọrụ na-wuru n'ime windows na-arụ ọrụ onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ụzọ Control Panel> Network na-ekere òkè Center> Media gụgharia ọrụ-agbaso na-aga:
2. The media gụgharia ọrụ a na-ahụ na-tụgharịa na iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma. Ọ bụ ezie na okwu DLNA bụ kwuru ma media gụgharia ọrụ jide n'aka na DLNA bụ ihe e zoro aka na:
3. The Ntọala gụgharia n'ime Windows Media Player na e agbakwunyere na-na-ahaziri nakwa iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi ọkaibe ọrụ mere n'ime oge ọ bụla na niile na gụgharia arụmọrụ na-malitere na ala na afọ ojuju:
4. The Windows Media Player kemgbe Mbido dị ka ihe nkesa DLNA na onye ọrụ nwere ike ijide n'aka na ihe nkesa DLNA na-enweta na ngwaọrụ ndị ọzọ dị ka mma. The atụ na-agụnye Roku, airplay na Doku Player dị ugbu a ka enwe ike ịnweta Windows Media Player na-ma ọ bụ na-ebunye gụgharia.
Ka e kwuru tupu nakwa na DLNA-anọchi anya "Digital Living Network Alliance" na mgbe ọ na-abịa doro ajụjụ Azịza ya bụ na ee, ọ bụ ka na-eji na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eme n'aka na ndị kasị mma na steeti nke nkà ọrụ na-eji nke a iji jide n'aka na nsogbu ahụ na-adị mgbe ọ na-abịa gụgharia. Ewu ewu na nke onu nwere ike ikpe site na eziokwu na n'agbanyeghị na ya e kere eke na 2003 ie afọ 12 gara aga ngwaahịa a ka na-anapụta ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ na Windows Media Player na-aga n'ihu na-enye ọrụ na àgwà na klas. The ọrụ ndị ọzọ na-agụnye ihe nkesa DLNA na-Xbox na PlayStation nke na-egosi na DLNA bụ ka na-ewu ewu media mgbe ọ na-abịa gụgharia. N'ihi kpọmkwem Ama biko gaa na http://www.makeuseof.com/tag/dlna-still-used/ iji nweta nile ambiguities banyere echiche kpebiri.
Nke a bụ akụkụ kasị mkpa nke a nkuzi ga-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe ngwaọrụ aha na nke a. The ọhụrụ atọ na ihe ndị kasị elu ụzọ ndị dị ka ndị na ga-ekwe ka onye ọrụ iji nweta a sara mbara nhọrọ:
1. anụ ahụ
Ọ bụ a gụgharia na ngwaọrụ na nwere ọbụna simplified echiche na na metụtara onu nke n'ụlọ netwọk ngakọrịta na emewo ka ihe mfe n'ihi na onye ọrụ. Ọ bụ-ahụ kwuru na ngwaọrụ efu $ 100 na a nkịtị n'ụlọ ọrụ onye a oge ego bụ ihe ọ bụla na-eme ka n'aka na mmasị na-egosi na fim na-streamed si ma ama saịtị ozugbo na PC.
Onye ọrụ nke Doku streamer bụ jụụ mfe dị ka onye ọrụ ntuziaka esokwa ngwaọrụ iji jide n'aka na ọrụ adịghị esi n'ime nke nke na-na ntọlite ​​na nke kacha mma n'ụzọ. Ngwaọrụ bụ dakọtara na al TV tent na nguzobe bụkwa dị mfe dị ka 1 2 3 na nke ahụ bụ ihe niile. Ndị na-esonụ image ga-agbasoriri na nke a:
Ọ bụkwa nke kasị mma na ndị kasị elu streamer nke na-eme n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results na ikwu na n'ozuzu mmezi nakwa dị ka gụgharia ọrụ a na-awa. Ọzọ onye ọrụ nwere ike iji akwụkwọ ntuziaka na nke a iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ na-abụghị nanị na-eji ma onye ọrụ na-odụk dịghị mbipụta.
The set elu nke Roku bụ nnọọ mfe na-eso dị ka zuru ezu ntụziaka pụrụ ịchọta na web. The URL http://techforluddites.com/roku-what-is-it-and-how-do-you-use-it/ bụ na-ịchọgharịrị iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi ọkaibe atụmatụ na nke a . Iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na egwu Mbido ndị na-esonụ foto ike a ga-agbaso:
Apple si airplay bụkwa a wuru na technology nke na-eme n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results na ikwu na gụgharia ọrụ. Usoro na-enye ohere onye ọrụ na-eme ka ojiji nke nkà na ụzụ bụ ndị kasị mma na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na Apple Inc. nkwado na-na-na-na metụrụ iji jide n'aka na nke nwere e kpebiri bụrụ na nke ọ bụla nke na nsogbu.
1. The akara center a ga-enweta na na ngwaọrụ iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye usoro malitere
2. The ọrụ mgbe ahụ mfe mkpa iji jide n'aka na ngwaọrụ nke iyi a chọrọ na-ahọrọ na-eme ka ndị kasị mma ojiji nke echiche:
Olee otú Mee a Windows XP buut Disk
> Resource> Windows> Olee otú iji Windows Media Player dị ka ihe nkesa DLNA